Faaxumaan Jaarsummaan Jaarsa Fudhatte. – Oromedia
Home » Oduu » Faaxumaan Jaarsummaan Jaarsa Fudhatte.
Faaxumaan Jaarsummaan Jaarsa Fudhatte.
February 22, 2017 @oromedia 0 Oduu,
Shamarreen Oromoo tokko kaadhimamtoota lama keessaa jaarsummaan abbaa manaa ishee filatte; kaadhimamaan hafe immoo beenyaa isaa fudhatee gaa’elicha eebbisuun nagaan gara mana isaatti gale.
(Oromedia, Jimmaa, Guraandhala 23, 2017 ) Oduun godina Jimmaa irraa nu dhaqqabe akka ibsutti, jiraattuu Godina Jimmaa Aanaa Qarsaa Ganda Awwaay Sabuu kan taate, shamarree Faaxumaa Abbaa Tamaam, kaadhimamtoota akka jaarsaatti ishiif dhiyaaatana lama keessaa tokko jaarsummaan filatte.
Shamarreen kun guyyaa lamaan dura gaafa Dilbataa nama akka ishee fuudhu barbaaddu waliin gaa’elaan wal hidhachuuf guyyaa qabatte.
Kanaaf ammoo jiraataa Magaalaa Finfinnee kan ta’e Abdulhakiim Huseen maatii ishee irraa hayyama argattee Dilbata darbe Guraandahala 19, 2017tti cidhaaf guyyaan qabameera.
Kanaaf ammoo dargaggoon kun guyyaa jedhame kana hamaamota qabatee gara bakkichaatti imale.
Bakkicha wayita ga’u garuu waan hin-eegamnetu isa quunname; Faaxumaan guyyaa lamaan booda Guraandhala 21, 2017 dhiira biraa waliin gaa’ela godhachuuf akka jettu dhaga’ame.
Dargaggoon Abbaa Sabaa Riyaam guyyaa kana Faaxumaa waliin gaa’ela dhaabbachuuf qophaa’ee jira waan ta’eef misirroo guyyaa qabatee garas dhaqe Abdulhakiimitti hime.
Abdulhakiim gamasaatiin dubbii kan fudhachuu diduun guyyaa isaa eegee cidha geggeessuuf dhaquusaa ibse.
Dhiironni lamaan garaa garummaa guyyoota lamaan akka fuudhaniif waadaan seenameef shamarreen kan kooti jechuun falmii jalqabu; Finfinneedhaa kan deeme Abdulhakiim fi guyyoota lama booda fuudhuuf guyyaa kan eeggatu Abbaa Sabaa Riyaa.
Falmiin dargaggoota kanaas miseensota poolisii aanichaa qaqqaba.
Poolisoonnis yaada dargaggoota kanneenii dhaggeeffatee dhimmicha jaarsoliin xumuraa jechuun gara buufata poolisiitti geesse.
Achittis jaarsoliin filatamanii garaa-garummaa guyyoota lamaan akkamitti dhiirota lamaaf akka kaadhimamte gaaffiin maatii misirroof dhiheessan.
Maatiinis waadaa kan seenameef guyyaa isaa eeggatee kan dhufe dargaggoo Abdulhakiim ta’us, “Finfinneedhaa dhufee intala keenya nifuudha jennee amantaa waan dhabneef nama fuudhu eggataa qopheessineef,” jedhanii deebisan.
Jaarsoliinis yaada maatii fudhachuun Shamarree Faaxumaan eenyutti heerumuu akka barbaaddu gaafatan.
Jaarsolii fuul dura gidduu namoota ishee fuudhuuf barbaadanii lamaa kan dhaabatte Faaxumaanis, kiiloo meetira 320 imalee garas kan dhaqe Abdulhakiimmiin filatte.
Kan filatame Abdulhakiimis baasii cidhaaf Abbaa Sabaa Riyaa baase danda’uun shamarree Faaxumaa fuudhe.
Sirni cidhichaas buufata poolisii aanichaadhaa jalqabee akka aadaatti gara mana maatii misirroo deemuun erga geggeeffamee booda gara Finfinneetti galan.
Akkanaan, Faaxumaa fuudhuuf qophaa’aa kan ture Dargaggoo Abbaa Sabaa Riyaanis Abdulhakiim waliin karaa qaroome mari’achuun filannoo misirroo kabaje.
Hogganaa Ittisa Yakkaa poolisii aanichaa Inispektar Roobeeraa Daanyaachaw akka himanitti, haalli akkanaa isaan quunnamee hin-beeku.
Adeemsi dargaggoota kanneenii garuu dinqisiifamaa dha: rakkoo qaroominaan irratti mari’atanii hiikuus kan dinqisiifatamuu fi kanneen kaaniif fakkeenya kan ta’udha!!
Previous: የአቃቤ ህግ የቪዲዬ ማስረጃዎች በእነ ጉርሜሳ አያኖ መዝገብ ቀረቡ፡፡
Next: Oromo Opposition leader and two others charged with terrorism